Wareysiyada Shaqada Ka dib marka aad codsatid shaqooyin badan, waxa dhici karta in shaqo-bixiye ku weydiisto inuu kula yeesho wareysi. Taas macnaheedu waxa weeye shaqo-bixiyuhu waxa uu rabaa inuu ogaado inaad tahay qof ku haboon shaqada iyo in kale. Xiitaa haddii aad gashid wareysi, waxa dhici karta in aanad helin shaqada, sidaa daraadeed waxa muhiim ah inaad taqaanid sida loogu fiicnaado wareysiyada. Fiidiyowgan, waxad ku baran doontaa waxyaabo faa’iido leh oo aad sameyn kartid ka hor, inta lagu jiro, iyo ka dib wareysigaaga.
Wax ka baro waxa la sameeyo ka hor, inta lagu jiro iyo ka dib wareysi shaqo. Wareysiyada Shaqada